Afartameeyo Xildhibaan oo Maanta Taageero u Muujiyay Xildhibaan Aadan Bare Ducaale
Xildhibaanada laga soo doortay gobalka Waqooyi-bari ee ku jiro baarlamaanka Kenya ayaa taageero u muujiyay hogaamiyaha golaha Aqlabiyadda ee Baarlamaanka Kenya Aadan Bare Ducaale oo ay sheegeen iney ku kalsoon yihiin, isla markaasna ay aaminsan yihiin inuu guulo ka keeni karo dagaallada ay Kenya kula jirto argagixisada.
War ay maanta oo jimco ah soo saareen Xildhibaanadaas tiradoodu ay ka badneyd 40-ka Mudane, ayaa waxey ku sheegeen in kooxaha argagaxisada ujeedadoodu ay tahay inay shacabka Keenyaanka ah u kala qaybiyaan dhinaca jinsiyada iyo diimaha ay aamisan yihiin.
Hadalka Xildhibaanadaan, ayaa ka dambeyay ayadoo maalmihii aynu soo dhaafnay ay xildhibaano ka tirsan Xisbiga talada hayo ee" Isbahaysiga Qaranka" The National Alliance (TNA) ay u soo jeediyeen Aadan Bare Ducaale inuu iscasilo kadib markii uu sheegay in mudo 30 maalmood ah ay ku soo bandhigi doonaan Maal-geliyayaasha iyo taageerayaasha kooxdii 2-dii bishaan fulisay weerarkii Jaamacada Gaarisa.
Dhanka kale, war-saxaafadeed kasoo baxay kulankii ay yeesheen xildhibaanadaas maanta ayaa lagu sheegay in wax laga xumaado ay aheyd in xubno ka tirsan TNA ay kasoo yeeraan hadaladaas. Waxeyna sheegeen mudanayaashaas in Aadan Bare Ducaale uu yahay masuul inta badan wax ka qabto dhibaatooyinka kala duwan ee ka dhaca Kenya.
"Hadii aan nahay Madaxda gobalka Waqooyi Bari Kenya waxaan taageersanahay oo naga wakiil ah Aadan Bare Ducaale, waxaana sidoo kale naga go'an inaan si dhow ula shaqeyno Hay'addaha amniga iyo dadka gobalka waqooyi bari, sidii loo cirib tiri lahaa Al-shabaab," ayey ku sheegeen war saxaafadeedkii ay maanta soo saareen.
Si kastaba ha ahaatee Hogaamiyaha Golaha Aqlabiyadda ee Baarlamaanka Kenya, Aadan Bare oo sidoo kale ah Xildhibaanka laga soo doortay deegaanka Dhuujis ee is-maamulka Gaarisa, ayaa dhawaanahaan cadaadis wuxuu oga imaanaayay xildhibaanno dowladda ka tirsan, kuwaasoo ku eedeyay inuu muddo dheer qabsaday sidii uu ugu soo bandhigi lahaa taageerayaasha kooxdii weerartay Jaamacada Gaarisa.
C/weli Gaas iyo Haila-mariam Desaliegn oo ku kulmay Caasimadda Itoobiya ee Addis Ababa
Madaxweynaha Puntland C/weli Maxmed Cali Gaas oo shalay galinkii danbe gaaray magaalada Addis Ababa ayaa la kulmay ra’iisul-wasaaraha Itoobiya Haila-mariam Desaliegn iyo xubno ka tirsan wasaarada arimaha dibadda Itoobiya.
Wafdi uu horkacayo wasiirka shaqada Somalia oo dalka Kuwait lagu soo dhaweeyay
Wafdi uu hoggaaminaayo wasiirka shaqada iyo arrimaha Bulshada Soomaaliya, C/weli Ibraahim Shiikh Muudeey ayaa maanta gaaray dalka Kuwait, iyadoo wafdiga ay kusoo dhaweeyeen garoonka diyaaradaha Kuwait safiirka Soomaaliya u fadhiya Kuwait, C/qaadir Amiin Sheekh, la-taliyaha safaarada, Abiib Muuse Faarax oo ay wehliyaan wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada dalka Kuwait, ahna wasiir-u-dowlaha qorsheynta iyo horumarinta, Hind Sabeeh Al-Sabeeh iyo madaxda ururka shaqaalaha dalka Kuwait.
Wasiirka oo ay wehliyaan safiirka, mas’uuliyiin ka socoday ururrada shaqaalaha madaxa-banaan ee Somalia oo ay ka mid yihiin, Maxamed Ibrahim oo ah sii-hayaha xoghayaha guud ee xiriirka ururrada shaqaalaha Somalia (FESTU), guddoomiyaha isu-tagga shaqaalaha Soomaaliyeed (SCTU), Maxamed Cusmaan Xaaji oo ah labo urur shaqaale oo madax-banaan.
Wafdigan ayaa inta uu joogo dalka Kuwait waxaay kaga qeyb-geli doonaan shirka guud ee ururrada shaqaalaha Carabta oo berri ka furmi doono magaalada Kuwait, shirkaasoo socon doona 18-ka illaa 25-ka bishan Abriin 2015-ka.
Ugu dambeyn, shirka ayaa inta uu socdo waxaa looga hadli doonaa arrimo ay ka mid yihiin; horumarinta shaqaalaha iyo wax-soo-saarka dalalka Carabta iyo sidii loo xoojin lahaa is-kaashiga shaqo ee dalalka Carabta.
Dableydii Weerartay Jaamacadda Gaarisa oo la sheegay inay kasoo jeedaan Waddanka Kenya
Kooxihii weeraray Jaamacadda Garissa ee Kenya oo ahaa afar qof ayaa la sheegay inay ahaayeen dad u dhashay dalka Kenyan; iyadoo weerarkaas ay mas’uuliyaddiisa sheegatay Xarakada Al-shabaab ee dalka Somalia.
Weerarka Gaarisa ayaaa lagu dilay ugu yaraan 148 ruux oo xilligaas ku sugnaa dhismaha Jaamacadda Garissa; tiro kalana waa ay dhaawaceen, iyadoo weerarkan uu socday muddo 16-saacadood ah.
Sidoo kale, kooxaha weerarka geystay mid ka mid ah ayaa la sheegay inuu ahaa wiil uu dhalay mas’uul ka tirsan Kenya, kaasoo horay mas’uul uga soo noqday Mandheera oo ku taalla gobolka Waqooyi-bari ee Kenya.
Warbixin sirdoon oo ay baahiyeen wargeysyo caalami ah ayaa lagu sheegay in saddexda ruux ee weerarkan ka qaybgalay ay ahaayeen muwaadiniin Keenyaan ah oo kasoo jeeda gobolka xeebta ku yaalla ee Mombasa iyo degmo ku taal galbeedka Kenya ee Bungoma.
Jariiradda Nation ee kasoo baxda Nairobi ayaa iyadana sheegay in caddeynta ragga weerarka geystay la xaqiijin doono marka lasoo gaba-gabeeyo baaritaan dhinaca faraha ah oo weli ay sirdoonka Kenya sameynayaan.
Booliska Kenya ayaan weli jawaabin warbixintan cusub ee soo baxay oo ee lagu sheegay in kooxihii weerarka ku qaaday Jaamacadda Gaarisa ee gobolka Waqooyi-bari ee dalka Kenya inay dhammaantood ahaayeen Kenyan.
Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa weerarkii Gaarisa kaddib uu sheegay inay ar-gagaxisadu ay xiddido ku leedahay gudaha Kenya, isagoo ballan-qaaday inay xoojinayaan dagaalka ay kula jiraan argagaxisada.
Kenya ayaa dul-dhigtay lacag gaareysa 215,000 oo doollar ruux ay sheegeen inuu ka tirsan yahay Al-shabaab uuna mas’uul ka ahaa weerarkii Jaamacadda Gaarisa ee lagu dilay dadka faraha badan.
Ugu dambeyn, Kenya ayaa waxay xoogga saaraysay inay amaanka dalkeeda sugto tan iyo markii ay kumanaan askarteeda ka tirsan oo qayb ka ah howlgalka AMISOM ay u dirtay Somalia, iyadoo weerarrada ka dhacay gudaha Kenya ay mas’uuliyadooda sheegatay Al-shabaab.